21.02 Ny fenitrin'ny fiainana kristianina (2)
Anio Alarobia 21 Febroary 2018 dia ny Lioka 6.43-49, no sakafom-panihintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ?sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
44 Fa samy fantatra amin’ ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy manoty aviavy amin’ ny tsilo, na voaloboka amin’ ny voaroy.
45 Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ ny rakitra tsaran’ ny fony; ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy; fa amin’ ny haben’ ny ao am-pony no itenenan’ ny vavany.
46 Ary nahoana hianareo no miantso Ahy hoe : Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko ?
47 Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy :
48 Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ ny vatolampy; ary nony tondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny riaka, nefa tsy nahahozongozona azy, satria tsara fanorenana izy.
49 Fa izay mandre, fa tsy mankatò, dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin’ ny tany, fa tsy nanisy fanorenana; dia namely azy mafy ny riaka, ka dia nirodana niaraka tamin’ izay izy; ary loza ny naharavan’ izany trano izany.
NY FENITRIN'NY FIAINANA KRISTIANA (2)
Ny voa dia ny teny aloakin'ny vava.
Fanaon’i Jeso ny maneho fanoharana amin’ny fampianarana rehetra ataony.
Zavatra mazava tsara no asehony eto ka hilazany hoe : ny tsilo tsy hamoa aviavy na oviana na oviana, na ny voaroy hamoa voaloboka.
Zavatra mazava be izany.
Fa tahaka izany koa ny hazo tsara tsy hamoa voa ratsy na ny mifanohitra amin’izany.
Dia tahaka izany tsy misy hafa ny fon’ny olona.
Raha fanahy tsara no mipetraka ao am-pon’ny olona dia teny tsara, io ilay voa, no avoakan’ny vavany.
Io ilay ambaran’ny Galatiana 5.22-24 mitanisa ireo toe-panahy tsara rehetra vokatrin'ny Fanahy Masina.
Hain’ny olona rehetra ny mikajy ny halalin’ny fototra rehefa hanao trano izy.
Ny trano tsara fototra dia mafy orina ka tsy matahotra ny rivotra sy ny riaka mety handalo. Tahaka izany koa, hoy Jeso, ny olona miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Entin’i Jeso hilazana fa ny Tenin’Andriamanitra no fototra tsara indrindra maha mafy orina ny fiainan’ny olona.
Io no hany manome ny fenitra tsara indrindra, mitondra ny fiainan’ny Kristiana tsy ankanavaka. Ny olona miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra dia tafaorina amin’ny fiainany manontolo.
Marobe ireo teny manambara izany fa santionany izay lazain’ny Salamo 119.11 hoe : ”Ato am-poko no hiraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao”.
Arofanina amin’ny lafim-piainana rehetra
ny Tenin’Andriamanitra sady manome fiainana be dia be
ho an’ny olona mino Azy.